Indlu Ethengiswayo eTathawade, ePune
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Maharashtra » Pune » Tathawade » Indlu Ethengiswayo eTathawade, ePune1
Usayizi waphansi: 1245 sq feet
3 BHK Apartment etholakalayo iyathengiswa eWakad, Tathawade, Pune. Izinsiza ezitholakalayo yilezi: Ijimu, ingadi, indawo yezingane, indawo yezemidlalo, phakamisa. Ifulethi linamagumbi okulala amathathu, igumbi lokugezela eli-3 Uneminyaka engu-1 ubudala. Impahla ingaphakathi komphakathi onamasango. Isakhiwo sinezitezi eziyi-12.
Xhumana nomkhangisi 151179xxxx
ITathawade ilokishi elincane esifundeni saseMoushi ePune, eMaharashtra. Iyingxenye yendawo eseMpumalanga Maharashtra. Itholakala ebangeni elingamakhilomitha ayi-18 ukusuka enkabeni yedolobha lasePune. Ibanga laso ukusuka enhlokodolobha yezwe iMumbai cishe ibungamakhilomitha ayi-120. Izindawo ezihlangene neTathawade yiShevantiban Colony, Matoshree Nagar, Sai Colony, Sathe Colony ne-Atharv Park Society. Iphinde iboshwe yiTalegaon Dabhade, Pune Taluka, Hasli Taluka, Mulshi Taluka kuzo zonke izinkomba ezine. Iziteshi ze-ConnecactionRailway ezixhumanisa iTathawade nezinye i-India yi-Akurdi neChinchvad. IKasarwad, iKhandala, iPimpri, iSivajinagar nePune Junction zixhuma le ndawo, zidale ugesi wenethiwekhi yezitimela. Ukuxhumana komgwaqo kunabile, ikakhulukazi emadolobheni aseduze afana ne-Lonavla, iMumbai. Izindlela ezivame kakhulu zokuhamba ngamabhasi nezindawo ezizimele. I-Real EstateTathawade yindawo ezayo edolobheni lePune. Le ndawo iyakhula ibe yisizinda sezimboni ze-IT ngokuhamba kwesikhathi futhi esisiza ukwenyuka kwamanani. Isimo esikhona kule ndawo ngama-Rs 5 500- Rs 6, 000 ngamamitha-skwele futhi kulinganiselwa ukuthi sikhule ngokusungulwa kwamahhovisi ezinkampani zamazwe ahlukahlukene. Abathuthukisi abaphambili kule ndawo baziwa ukuthi bangabakwaGoel Ganga Abathuthukisi kanye Nokwakha, AbakwaBhandari Associates, AmaSikimu weParanjpae, Amakhaya weBhojwani, Abakhi be-DNV, Keystone Lifespaces. Ingqalasizinda yezenhlalo iTathawade idume ngengadi yayo enesithombe esikhulu somlwi wempi uMajor Pradeep Tathawade, owanikela ngokuphila kwakhe empini yango-2000. Olunye uphawu olukhulu lapha ithangi lamanzi elanikezwa idolobha yi-Indian Army njengesenzo esihle. Kunezikhungo ezimbalwa ezibalulekile zemfundo, okuyiMamasaheb Mohol Vidyalaya, izifundo ze-Alard College of Engineering And Management, iRani Laxmibai Girls Sainik School.